အင်တာနက်မှာ ကြော်ငြာကြည့်သူများအား ကြော်ငြာကြည့်ခပြန်ပေးမည့်
Home » Events » Announcement » အင်တာနက်မှာကြော်ငြာကြည့်သူများအား ကြော်ငြာကြည့်ခပြန်ပေးမည်
Address: yankin center near
Contact Number: 09 0930095723
Email Address: asia.dream.japan.myanmar@gmail.com
Listed: July 29, 2014 5:30 pm
asia.dream.japan.myanmar@gmail.com(0930095723)လူကြီးမင်းတို့ အားလပ်ချိန်တွင် လူကြီးမင်းတို့၏ ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ မှတဆင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကြော်ငြာအား ခဏတာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုပေးရုံဖြင့် မိမိ အိမ်၊ ရုံး၊ ကျောင်းမှနေပြီး ထိုင်ရာမထ အလုပ်မပျက် လစဉ်ဝင်ငွေ + Bonus ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– ရုံးဝန်ထမ်းများ အနေနဲ့ မိမိလက်ရှိ အလုပ်ထွက်စရာမလိုဘဲ အားတဲ့အချိန်လေးကို အသုံးပြုပြီး အပိုဝင်ငွေထပ်ရှာလိုက်ပါ။ Online ပေါ်မှဂျပန်နိုင်ငံ website ကနေ ကြော်ငြာများကိုတနေ့ကြော်ငြာ ၁၅၀ click ပြီး ၁လ ၀င်ငွေ2သောင်းမှ ၁ လ ၀င်ငွေ သိန်း ရာကျာ် ရနှိင်မည်။ ကြော်ငြာတွေကို Clickလုပ်ရုံနဲ့ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
ကြော်ငြာတွေကို စတင်ကလစ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ Official Group Leader( ကိုယ်စားလှယ်) တွေဆီမှာOnline ကနေ အောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုပြည့်စုံစွာ ရေးပြီး , Viber, ဒါမှမဟုတ် Phone 0930095723 ကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြီးတော့ MSG ပေးပို့ Form ဖြည့်စာရင်းပေးသွင်းလို့ရပါတယ်။Free Member clicker အခကြေးငွေလုံးဝပေးစရာမလိုအပ်ပါ ( Acc & Password ရသည်နှင့်9လပိုင်တွင်စတင်ကလစ်နှိင်ပါမည်)
– Email = Gmail (ကုမ္ပဏီမှ အလွယ်တကူဆက်သွယ် နိုင်ဖို့ပါ မရှိလည်းရပါတယ်)
– ဇူလိုင် တစ်ရက်နေ့တွင် ရှိမည့်အသက်
– (KBZ , CB မှ ) Bank စာရင်းနံပါတ် ( မရပါ ATM card no များ)
– ငွေစာရင်းအမည်- ဘဏ်ခွဲအမည် (ဘဏ်စာအုပ်မလုပ်ရသေးသူများ နောင်မှပေးပို့လို့ရပါတယ် )
!!Free Member user များသည် Company သို့ ငွေပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ!!! Premium Member user များသည် ကုမ္ပဏီ သို့ မြန်မာငွေကျပ် တစ်သိန်း သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အခု Free Member အတွက် စရှင်းပါ့မယ်။
$ Free Member ၀င်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ကြော်ငြာ Click နှုန်းမှာ 1 Click ကို ၅ Kyat ရရှိပါမယ်။
1နာရီကို 150 ကြိမ်ခန့် ကလစ်လို့ရပါတယ်
1နာရီ အင်တာနက် အသုံးပြုခ = 120 Kyats
5Ks x 150 Time (1Hr)= 750 Ks
တနေ့ကို ၁နာရီကလစ်မယ် ဆိုရင် တစ်လကို အင်တာနက်အသုံးပြုခ နှုတ်အပြီး 18,900 Kyats ရပါပြီ ။ တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်က Internet အလကားသုံးနေရတာဆိုရင်တော့ လုံးဝ Lucky ပေါ့ဗျာဒါကတော့ Free Member တစ်ယောက်ရဲ့ခံစားခွင့်တွေပါ။ ကဲအခု Premium Member အကြောင်းပြောဆက်ပြောပါ့မယ်။
$ Premium Member ၀င်တစ်ယောက်အနေဖြင့် Click နှုန်းမှာ 1 Click ကို ၃၀ ကျပ် ရရှိပါမယ်။ တွက်ကြည့်မယ
Ad Reference ID: 72953d71c9e193a4
Listed by: luckyfamily
Other items listed by luckyfamily
Latest items listed by luckyfamily »
All times are GMT 6.5. The time now is 3:14 am.